यस्तो देखियो हनुमानढोकाको गद्धी बैठक भवन - Janata Times
यस्तो देखियो हनुमानढोकाको गद्धी बैठक भवन
भुकम्पले तीन वर्ष अघि भत्काएको हनुमान ढोकास्थित गद्धि बैठक भवन पुन निर्माण भएको छ । भवनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्दै उहाले नेपाल आर्थिक समृद्धि र विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यस भवनको पुननिर्माण (रेक्ट्रो फिटिङ) का लागि सहयोग गरेकोमा अमेरिका राजदुतवास माफर्त अमेरिकी सरकारलाई आभार प्रकट गर्नुभएको छ । हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा रहेका सबै भवनहरु नेपालको पौराणिक अवस्था झल्काउने,ऐतिहासिक र साँस्कृतिक महत्वका भएको बताउनुभयो । २०७२ सालको भूकम्पले ९ हजार भन्दा बढी घर भत्काएको, लाखौं मानिस घरबार विहिन भएको ,सयौं साँस्कृतिक धरोहरहरु क्षतविक्षत भएको प्रधानमन्त्री ओलीले स्मरण गर्नुभयो । “हामी भूकम्पले क्षतीग्रस्त अवस्थामा भएका बेला अमेरिकाले गरेको सहयोग उल्लेखनीय छ ” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो “हामी भविष्यमा पनि यस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले भूकम्प पछिको पुननिर्माण अझ राम्रो बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो । संविधानसभाले संविधान जारी गरेर,नयाँ निर्वाचन मार्फत सरकार गठन भइसकेपछि देश नयाँ युगमा प्रवेश गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो “राजनीति संघर्षको युग सकेर हामी अब विकास र समृद्धिको यात्रामा छौं । ” फेरी पनि भूकम्प आउन सक्ने भएकोले अबको पुननिर्माण थप गुणस्तरीय हुनु पर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । भवन उद्घाटन अघि प्रधानमन्त्री ओलीले बसन्तपुर दरबार परिसरको अवलोकन गर्नुभएको थियो ।
June 27, 2018मा प्रकाशित
कांग्रेस नगर सचिवसहित डेढ दर्जन कार्यकर्ता नेकपामा प्रवेश
सिलवाल संघीय संसद छिर्दा किन हल्लियो बुढानिलकण्ठ ?
दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष झाद्धारा राजिनामा !
७ नम्बर प्रदेशमा एमाले पहिलो पार्टी बन्ने नेता रावलको उद्घोष